AfriWallStreet na-ewepụta Platform Maka Ndị Ọkachamara na Azụmahịa Africa
Ọkachamara Naijiria na ikpo okwu dabere na azụmaahịa, AfriWallStreet, na-eduga n'ụdị dị iche iche yana ọrụ na ịkparịta ụka n'Ịntanet ọkachamara, ụlọ akwụkwọ azụmahịa n'ịntanetị na mgbasa ozi dijitalụ.
Emebere mmalite a iji kwado nka ọkachamara na ịzụ ahịa n'Africa. Ndị ọchụnta ego na ndị ọkachamara n'Afrịka na-eche ọtụtụ ihe mgbochi ihu dị ka enweghị ego na ahịa, nka azụmaahịa na-adịghị mma, amaghị etu esi azụ ahịa, iwe ndị ọrụ n'ọrụ, na enweghị ndị ndụmọdụ.
AfriWallStreet dị ka Amazon nke ndị ọkachamara, na-enye usoro kachasị mma maka ịkparịta ụka n'Ịntanet ọkachamara na azụmahịa, ndị mmadụ na-ekerịta ihe ọmụma, ndụmọdụ ọrụ na ọrụ nchịkwa, ịmụta, ọrụ na ohere ọrụ, na ọ na-eje ozi dị ka ebe ahịa maka ndị mmadụ na-enye ọrụ na ngwaahịa ha. .
Amalitere na ngwụcha afọ 2019, AfriWallStreet chọrọ ịbụ obodo ịntanetị kachasị maka ndị ọkachamara na azụmaahịa iji jikọọ na netwọkụ.
Ebumnuche mmalite bụ ikwado ikesa ozi, echiche, ihe ọmụma na ohere.
"Anyị kwenyere na anyị nwere ike imeziwanye ohere nha anya inweta ohere na ihe ọmụma, kekọrịta ihe ndị dị mkpa na ndụ ka anyị na-ebili site na ibuli ndị ọzọ."
Bụ netwọk mmekọrịta emebere maka ndị ọrụ na ndị ọkachamara azụmaahịa jikọọ, netwọkụ, ịkparịta ụka na imekọ ihe ọnụ n'enweghị nsogbu.
Ndị otu nwere ike ijikwa profaịlụ ọkachamara ha, hụ ndị ha maara, kesaa echiche, nweta ihe ọmụma, ma kesaa ohere n'ime obodo. Ndị na-achọ ọrụ nwere ike itinye akwụkwọ maka ọrụ na otu ọrụ / ohere ohere.
"Ogbe anyị na-enye ikpo okwu maka freelancers na-enye ndị ahịa ọrụ n'ụwa nile. Kwalite akara gị, wulite njikọ, too."
Emebere ya iji nye nkwado ndị ọkachamara na-eto eto. AfriWallStreet Business Academy (ABA) bụ atụmatụ ga-akwalite uto akụ na ụba site n'inye ọzụzụ azụmaahịa, ndụmọdụ na ịkparịta ụka n'Ịntanet, yana njikọ na itinye ego.
"Anyị maara na ọtụtụ ndị na-eto eto na-eche ihe mgbochi dị ịrịba ama ihu mgbe ha na-arụ ọrụ ha. Ebumnuche AfriWallStreet Academy iji nweta ụfọdụ ebumnuche mmepe nke UN Sustainable. Anyị chọrọ iwulite netwọkụ ọkachamara ebe ndị otu na-eme ihe pụrụ iche. "